Allgedo.com » Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey Muqdisho
Home » News » Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey Muqdisho Print here| By: allgedo.com:
Monday, July 9, 2012 //
Jawaabaha waa la xiray Muqdisho, July, 09, 2012——Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay ka dib shir uu uga qeyb galay dalka Talyaaniga kaa oo ay soo qaban qaabisay International Contact Group (ICG) oo lagaga hadlayay Arrimaha Soomaaliya gaar ahaan Arrimaha Roadmap-ka iyo Sidii looga bixi lahaa KMG.
Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdigii la socday ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cadde, halkaas oo ay ku soo dhoweeyeen Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha, Wasiiro, xildhibaano, Ururada Haweenka, Saraakiil iyo Shacab kale oo aad u farabadan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa marka uu soo degay kadib saxaafadda kula hadlay gudaha garoonka diyaaradda ee Aadan Cadde International Airport, Isagoona Sharaxaad kooban ka bixiyay Shirkii uu dalka Talyaaniga kaga soo qeybgalay.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan dalka dib ugu soo laabto, waxaan ka imid Magaalada Nairobi, ka hor waxaan shir uga soo qeybgalay dalka Talyaaniga oo ay soo qaban qaabisay ICG oo lagaga hadlayay Arrimaha Soomaaliya islamarkaana muhiimad gaar ah lahaa shirka waxaa lagaga hadlay Roadmap-ka iyo sidii looga gudbi lahaa KMG”.
Ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in Shirkii Talyaaniga ee ICG looga hadlay sidii loo taageeri lahaa dowladda Soomaaliya islamarkaana intaa ku daray in goobaha laga xureeyo Al-Shabaab la gaarsiin doono Gargaarka Bini’aadanimo, Wuxuuna intaasi ku daray in shirka uu ku soo dhamaaday si guul ah.